Al-Shabaab oo sheegatay qaraxii lagu dhammaaday ee EX-Koontarool Afgooye | Xaysimo
Home War Al-Shabaab oo sheegatay qaraxii lagu dhammaaday ee EX-Koontarool Afgooye
Al-Shabaab oo sheegatay qaraxii lagu dhammaaday ee EX-Koontarool Afgooye
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda qarax Sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana ururkaasi uu raalligelin ka bixiyay dadkii tirada badnaa ee qaraxaasi ku dhintay.
In kabadan 80 qof oo ay ku jiraan arday dhawr ah oo dhiganayay jaamacad ayaa ku dhintay qaraxaasi oo ka dhacay waddo aad u mashquul badan.
Afhayeen u hadlay Al-Shabaab ayaa sheegay in bartilmaameedkoogu uu ahaa kolonyo baabuur ah oo ay wateen dad u dhashay dalka Turkiga oo xulufo la ah dowladda Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in kooxdiisa ay ka xun tahay dhibaatada soo gaartay dadka Soomaalida ah.
Al-Shabaab ayaa in kabadan toban sano kacdoon ka wadday gudaha Soomaaliya, waxaana dadka falanqeeya arrimahan ay sheegayaan in Al-Shabaab ay dooneyso in ay qiil u raadiso weerarrada ay Soomaaliya ka geystaan si ay u helaan taageerada shacabka.
Qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxa Ex-Koontarool ayaa loo qaaday Turkiga
Mar sii horreysay oo shalay ah ayaa saraakiisha soomaaliya waxay qaraxaasi ku eedeeyeen in uu gacan ka geystay waddan aysan carrabaabin balse ma aysan soo bandhigin caddeymo muujinaya arrintaasi.
Sida ay sheegtay hay’adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA, madaxda Soomaaliya waxaa loo gudbiyay warbixin “hordhac ahayd oo la xiriirtay qarixii Ex-Koontarool”.
Qaraxa wuxuu Sabtidii ka dhacay isgoyska mashquulka badan ee isku xira Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada Koonfurta Soomaaliya, waa midkii labaad ee dhimashada ugu badan sababay ee dhacay seddaxdii sano ee la soo dhaafay gudahood.
Barta Twitter-ka ee NISa waxay qortay: “Waxaan madaxda qaranka ugudbinay, warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in Xasuuqii Shacabka Soomaaliyeed loogu gaystay Muqdisho, 28-Dec-2019, uu qorshayntiisa lahaa Dal shisheeye”.
“Baariitaanka socda si loo dhamaystiro, waxaan la kaashan doonnaa Hay’adaha sirdoonka Caalamka qaarkiis.” ayey ku sii dartay, in kastoo aysan magacaabin dalka lagu eedeynayo qaraxaas.Xuquuqda Sawirka @HSNQ_NISA@HSNQ_NISA
Ilaa shalay galab waxaa Muqdisho ka socda gurmadka loo fidinayo dadka ay waxyeellada ka soo gaartay qaraxaas.
Guddiga Gurmadka ee loo aasaasay weerarkii Ex-Koontarool ayaa sheegay in la helay 12 ka mid ah 24-ka qof ee la la’aa.
“Shan wey dhinteen, mid waa dhaawac, lixda kalena way fiican yihiin”, ayaa lagu xoray Wakaaladda wararka dowladda ee SONNA.
Sidoo kale, milatariga Mareykanka ayaa sheegaya in afar ka mid ah mintidiinta Al-Shabaab ay ku dileen duqeymo ka dhacay gudaha Soomaaliya.
Waxay ahayd dhacdo kale oo argagax leh oo soo marta dadka reer Muqdisho kuwaasi oo dhibane u noqday qaraxyada aan dhamaadka lahayn ee ku soo noqnoqnayay magaalada 10-kii sano ee ugu dambeeyay.
Waxay galaafteen nolosha dad aad u badan, kuwa kalena waxaa ka soo gaaray dhaawacyo halis ah oo saameeyay noloshooda oo dhan.
Waxaa halkaas ku yaalla kastam canshuuraha lagu qaado, waana meel subixii aad u mashquul badan oo ay isaga gudbaan gawaarida dadweyna, kuwa ardeyda, gawaarida isaga kala gudubta qeybo ka mid ah gobolada Koonfurta dalka iyo Caasimada Muqdisho taas oo keentay inay halkaas ka dhacdo musiibo dad badan galaafatay.
Daawo: Goobta uu qaraxa ka dhacay ee Muqdisho
Qof goobjoog ahaa ayaa yiri: “Halkaan musiibo ballaaran ayaa ka dhacday, aniga indhahayga waxaan ku arkay dad badan oo midba meel ku dhacay, qaarkood hilbohooda ayaan ka soo gurnay”.
Meydad badan ayaa inta la is garab dhigay lagu guray gawaarida gurmadka. Burbur baaxad leh, gawaari badan oo gubatay iyo waxyaabo laga argagaxo ayaa goob kasta daadan iyadoo weli la la’yahay dad kale.
“Miyirkii dhan baa iga tagay markaan arkay meydadkii ardayda iyo dadkii kale oo ku waxloobay”, ayuu yiri goobjoogahaas.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay dhacdadaas wuxuuna yiri: “Argagixisadu waxay xasuuqeen shacabka, cadawtinnimo ayayna u hayaan horumarka dalka”.
“Maanta waa maalin murugo badan oo muujineysa sida argaixisada ay bartilmaameed uga dhigteen shacabkeenna. Waxaan tiiraanyada la wadaagayaa qoysaska dadkii naga shahiiday, waxaana Alle uga rajaynayaa inuu noo bogsiiyo dhaawaca,” ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada Villa Somalia.